Sabtida, Juun 7, 2014 Jimco, Juun 6, 2014 Douglas Karr
Teknolojiyada moobiilka ayaa wax walba beddelaya. Macaamiisha ayaa adeegan kara dukaamaysiga, helitaanka jihooyinka, ka daalacan kara webka, la macaamilka asxaabta iyada oo loo marayo qaabab fara badan oo warbaahin ah, kuna diiwaan geliyaan noloshooda hal aalad yar oo ku filan oo ay ku habboon tahay jeebkooda. Marka la gaaro 2018, qiyaastii 8.2 bilyan aaladaha mobilada firfircoon ayaa la isticmaali doonaa. Isla sanadkaas, ganacsiga mobilada ayaa la filayaa inuu kor u kaco $ 600 bilyan oo doolar sanadkii. Sida iska cad, adduunka ganacsiga waxaa lagu beddelayaa tan ugu dambeysa